सडन डेथमा धरानलाई हराउँदै बेलबारी क्वाटरफाइनलमा – Khel Dainik
सडन डेथमा धरानलाई हराउँदै बेलबारी क्वाटरफाइनलमा
पथरी (खेलदैनिक) । सडन डेथको जितसँगै बेलबारी एफसी जारी पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय रिफ्युजी च्यालेन्ज कप २०७७ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार प्रिक्वाटरफाइनलतर्फ एफएफसी धरानलाई सडन डेथमा हराउँदै बेलबारीले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
भुटानी शरणार्थी शिविरको स्थानीय खेलमैदानमा भएको निधारीत समयको खेलमा दुवै टोलीले पाएको राम्रा अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल रहित बराबरी खेल्नु परेको थियो । टाइबेकरमा पनि २–२ गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय सडन डेथतर्फ धकेलीएको थियो । सडन डेथमा भने बेलबारी ४–३ ले बिजयी भएको थियो ।
टाइबेकरमा बेलबारीका लागि कप्तान राजकुमार राई, बिबेक पौडेल, अन्जान राई, विल्सन गिरीले गोल गरे भने कासिम राईको बल आउट भएको थियो । त्यस्तै धरानका लागि निमोन लिम्बु, निपु तामाङ र साजन राईले गोल गरे भने अनिल धामी र सुसन लामिछानको प्रहार बाहिरिएको थियो । धरानका दिवश राईको प्रहार भने बेलबारीका गोलरक्षक अभिशेक बरालले बचाएका थिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच बेलबारीका गोलरक्षक अभिशेक बराल घोषित हुदै नगद २५ सय प्राप्त गरे । बराललाई पथरी स्र्पोटिङ क्लवका अध्यक्ष धनकुमार तामाङले नगद तथा ट्रफीले पुरस्कृत गरे । प्रतियोगिता अन्तरगत माघ ७ गते बुधबारको खेल खेल लेटाङ फुटवल क्लव र वाइ एफ.सी. पथरी ए बिचमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
भुटानी शरणर्थी शिविरका युवाहरुको समूह यूथ फ्रेन्ड्ली सेन्टरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख १ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ५१ हजार प्राप्त गर्नेछ । फाइनल खेल आउँदो माघ १५ गतेका दिन हुनेछ ।
← काठमाडौं–११ सेमिफाइनलमा आयोजक आदर्श र न्यु एभरेष्ट क्वाटरफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ ६, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ ६, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ ६, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ ६, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ ६, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ ६, २०७७